Neti SME: nke mbụ mebere | Site na Linux
Anyị chọrọ ime «mbụ mebe mkpụkpu»Tupu mmiri abanye n'ime mmejuputa na nhazi nke ọrụ netwọkụ kachasị arụ ọrụ na SMEs. Anyị na-ekwu "ịkpụ aka", ebe ọ bụ na anyị ga-ede ọzọ na isiokwu ndị ekpuchiri ekpuchi mana yana nkesa ndị ọzọ: desktọọpụ na CentOS ma ọ bụ na OpenSuSE na ndị ọzọ. Ha bụ nnyefe nke m ka ji ụgwọ maka enweghị ebe nchekwa m, karịa ma ọ bụ pere mpe, nke nkesa ndị ahụ.
N’isiokwu anyị, anyị na-enye a Point na isiokwu ọ bụla kpuchie. O nweghị ike ịbụ ụzọ ọzọ. Ọ bụ eziokwu na anyị na-anwa ịbanye ntakịrị na nke ọ bụla n'ime ha, iji bụrụ ihe nduzi nye ndị na-agụ Spanish na-agụ akwụkwọ mgbe ha na-emejuputa ọrụ, ma maka nnwale ma ọ bụ mmepụta.
LUsoro ndị akọwapụtara na isiokwu niile ebipụtara na-arụ ọrụ ọbụlagodi maka gburugburu nrụpụta. Anyị anaghị ede banyere ihe ọ bụla nke anyị nwalere ma kwenye na ya ọtụtụ oge.
Anyị na-anwa ịgbaso usoro ezi uche dị na ịnyefe. Isiokwu ndị mbụ raara nye ime ka anyị bụrụ Worklọ Ọrụ. Mgbe ahụ, ya na Debian na CentOS, iji mee a Onye nlekọta banyere Qemu-KVM. Emechaa jikwaa ndị nlekọta ahụ, ma site na Virt-Manager, iwu Iwu-iwu, ma ọ bụ site na isi interface jikwaa hypervisors, nke bụ iwu Virsh, nwere njikọ chiri anya na ụlọ ahịa akwụkwọ libvirt.
1 Kedu ihe kpatara anyị ji esi ọnwụ na Qemu-KVM, Virt-Manager na Virsh?
2 Kedu ihe kpatara na anyị anaghị ede banyere Ubuntu?
3 Olee isiokwu ndị anyị bipụtara ugbu a?
4 Isiokwu ndị dị a willaa ka anyị ga-atụle n'ọdịnihu?
Kedu ihe kpatara anyị ji esi ọnwụ na Qemu-KVM, Virt-Manager na Virsh?
A na-etinye ma hazie mmemme ndị dị n'elu n'otu ụzọ ahụ na nkesa ahọrọ dị ka ihe ndabere maka usoro SMB.
A na-achọta ha na ndabara na nchekwa nke nkesa ndị a na ọbụlagodi DVD echichi.
Ma ọ dịkarịa ala, amaara m na Ubuntu, CentOS, na OpenSuSE, na-enye nke ọ bụla n'ime ndị nrụnye ha nhọrọ raara onwe ha nye iji wụnye a Onye nlekọta.
Ha anaghị adabere ma ọlị na desktọọpụ gburugburu eji.
Ihe ngwọta dabere na mmemme ndị gara aga na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ndị na-esonụ, na-agbanwe nhọrọ nke Nchịkwa nchịkwa, dabere na ọnụ ọgụgụ ndị nlekọta na igwe ọrụ ha, ma ọ bụ dịka nhọrọ onwe onye na mmasị ha:
Oche - Desktop
Stlọ ọrụ - Ọrụ
Otutu ndi nlebara anya dika nke SME
Igwe ojii, Cloud, data Center, Ọrụ mba, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ nnukwu set nke anụ ahụ na sava mebere
Anyị enweghị ike ịgọnahụ na azịza dabere na Qemu-KVM dị oke egwu, na nke ahụ na-abịa na ndabara na ọtụtụ ebe nchekwa nke sistemụ arụmọrụ Linux eji arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
na data Center ebe enyi m na onye ọrụ ibe m bụ Julio Cesar Carballo na-arụ ọrụ, ha nwere ihe karịrị sava 4000 nwere Qemu-KVM, interface nchịkwa OpenStack, yana sistemụ arụmọrụ Ubuntu Server. Enyi ọzọ na onye otu ibe anyị, Eduardo Noel Nuñez, nwere ndị nlekọta anọ nwere Qemu-KVM, oVirt ochichi njikwa, yana CentOS 4. Ekwenyela na ntinye anyị na-eweta dịka ihe atụ ama ama. Chọọ ọnụọgụ ole ụlọ ọrụ obere na obere jirila azịza a.
Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ na ndị na - eso ụzọ nke isiokwu m maara banyere mmasị m maka Debian. Agbanyeghị, ana m amata Onye isi nke Red Hat, Inc. ụlọ ọrụ na ụwa azụmaahịa na-eji Linux, agbanyeghị ụlọ ọrụ SuSE Enterprise na nkwekọrịta.
Uche m: Nzọ nke Red Hat, Inc. megide ngwọta VMware, bụ kpọmkwem Qemu-KVM, libvirt, Virt-Manager na oVirt. Dịka nghọta na nghọta m pere mpe, Red Hat, Inc, eri ogologo oge na-ewere akụkụ kacha mma nke achịcha ahụ. Mmmmmmmmmmmm
Kedu ihe kpatara na anyị anaghị ede banyere Ubuntu?
Anyị na-atụle na isiokwu ndị metụtara mkpuchi nke ọrụ netwọkụ na Debian, bụụrụ ụzọ izizi maka Ubuntu. Canonical na-ebugharị nkesa Ubuntu nkesa na gburugburu ụlọ ọrụ. Agụgogola m echiche na ọ gbahapụrụ Desktọpụ ya Ubuntu ntakịrị, ụzọ m na-ekwenyeghị. Ubuntu bụ nkesa ahụ mere ka ihe dị iche na Linux were na Desktọpụ. Linux Mint, onye sitere na Ubuntu, na - enye otutu ihe ndozi ndi ozo - ihe ngosiputa zuru oke banyere onu ogugu nke mbu choro iji mee ka ndu diri onye oru nke rutere Linux.
Ọ bụrụ na anyị gara n'ọtụtụ saịtị raara nye ibipụta isiokwu gbasara ọrụ, anyị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha gbasara nkesa a. N'aka nke ọzọ, e nwere ndị ọrụ gọọmentị Ubuntu raara nye isiokwu nke ọrụ netwọkụ nke a na-enye ezigbo akụkọ.
Ke ibuotikọ Nkesa karịrị oge Linux nkesa anyị mere ka o doo anya ihe mere anyị ji họrọ Debian, CentOS - RHEL, na OpenSuSe - AHSE, dị ka isi nkesa maka isiokwu anyị.
Olee isiokwu ndị anyị bipụtara ugbu a?
Isiokwu ndị dị a willaa ka anyị ga-atụle n'ọdịnihu?
Mmejuputa atumatu oru kachasi na SMEs: DNS, DHCP, NTP, wdg.
OSlọ ọrụ CentOS na OpenSuSE
Virtualization na OpenSuSE
DNS na DHCP na OpenSuSE site na iji Yast
Na ruo mgbe njem ọzọ, ndị enyi!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Neti SME: nke mbụ mebere ịkpụ
Ebube usoro enyi Federico. Dịka m kwuchara, m gara n'ihu itinye ya n'ọrụ na nsonaazụ dị mma. Na mgbakwunye, emeworị m ụlọ nyocha ụlọ m iji gaa n'ihu na isiokwu ndị m na-agaghị etinye na ụlọ ọrụ m. Nkwanye ugwu m !.
Zaghachi Zodiac Carburus
Obi dị m ụtọ ịnụ na ị nara ndụmọdụ m, Zodiac. Chere isiokwu ndị na-esonụ.
Kedu nnukwu ọrụ ị mere na blog, ezigbo Federico m, abụ m otu n'ime ndị guzobere ụlọ nyocha nke onwe gị na-agbaso ndụmọdụ gị site na nkwụsị. O doro anya na ọ bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ m kachasị mma n'oge na-adịbeghị anya iji gụọ isiokwu gị ziri ezi na nke nwere ahụmahụ zuru ezu.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nkọwa niile na nkeji ọ bụla ị na - enye iji kuziere mmadụ dịka m, anyị nwere ọtụtụ, ọtụtụ ihe anyị ga - amụta.
Yabụ, ezigbo Lagarto, dịka enwere ọtụtụ ndị ọbịa na nsonso a - ọbụlagodi na ha anaghị ekwu okwu - aga m ede ya. Chere ndi ozo banyere openSUSE!
Etu esi etinye TeX Live na Linux Mint na ndi ozo